नबिल बैङ्कद्वारा चाइना ‘युनियन पे कार्ड’ सेवा शुरू | गृहपृष्ठ
Home बजार नबिल बैङ्कद्वारा चाइना ‘युनियन पे कार्ड’ सेवा शुरू
माघ ३, काठमाडौं । नबिल बैङ्कले चाइना युनियन पे कार्ड सेवा शुरू गरेको छ । सोमवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच चिनियाँ राजदूतावासका निमित्त मिशन प्रमुख झी हुइले सो कार्डमार्फ नबिल बैङ्कको एटीएमबाट पैसा भुक्तानी लिई सो सेवाको शुभारम्भ गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ शुरू भइसकेको सर्न्दर्भमा बैङ्कले चाइना युनियन पे कार्ड सेवा शुरू गरेको बताए । यसबाट चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा विदेशी मुद्रा बोकिरहनुनपर्ने काराबारको लागि सुविधा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस सेवाबाट नेपालमा कारोबार गर्ने चिनियाँ र चीनमा कारोबार गर्ने नेपाली व्यापारी तथा विद्यार्थीलाई पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो । उनले निकट भविष्यमा बैङ्कले नै उक्त कार्ड वितरण गर्नेसमेत जानकारी दिए ।
सन् २००२ देखि सञ्चालनमा आएको चाइना युनियन पे कार्ड चिनियाँ स्टेट काउन्सिल तथा पिपुल्स बैङ्क अफ चाइनाबाट अनुमति प्राप्त सेवा हो । हाल विश्वका ९० देशका करीब २ अर्ब ३० करोड जनताले यो कार्ड प्रयोग गरिरहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
सो अवसरमा बोल्दै चाइना युनियन पे अन्तरराष्ट्रिय विभागका उपाध्यक्ष वाङ लि झिङले नेपालको प्रतिष्ठित बैङ्कमार्फत यनियन पे कार्ड सञ्चालनमा ल्याउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल भ्रमण वर्षको अवसरमा यो सेवा शुरू भएकाले चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा कारोबार गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । चाइना युनियन पे कार्ड प्रयोग गरी नबिल बैङ्कका जुनसुकै एटीएम काउण्टरमार्फ रकम भिक्न सकिन्छ ।
एभरेष्ट बैङ्कको सन्धिखर्कमा शाखा
माघ ३, काठमाडौं (अस) । एभरेष्ट बैङ्कले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा शाखा खोलेको छ । बैङ्कको यो ३९ औं शाखा हो । सो शाखाको सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले उद्घाटन गरे । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आधुनिक बैङ्किङ सेवा दिने उद्देश्यले उक्त शाखा सञ्चालनमा ल्याइएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ । यस शाखाबाट अन्तरशाखा बैङ्किङ कारोबार, एसएमएस बैङ्किङ, इण्टरनेट बैङ्किङ, अनलाइन विप्रेषण, मोबाइल रिचार्ज र टेलिफोन महशुल भुक्तानीलगायत सेवा उपलब्ध हुने सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
बैङ्कका एटीएम कार्डबाट नेपालमा रहेका एससीटी नेटवर्कका ६ सय ५० भन्दा बढी र पञ्जाब नेशनल बैङ्कका ४ हजारभन्दा बढी एटीएम काउण्टरबाट रकम झिक्न सकिन्छ । हाल बैङ्कले ७५ ठाउँबाट बैङ्किङ सेवाप्रदान गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत ३९ शाखा, ५ निक्षेप सङ्कलन काउण्टर र विभिन्न गाविसमा २९ आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत एभरेष्ट घर दैलो बैङ्किङ सेवाप्रदान गर्दै आएको छ । बैङ्कले आवश्यकतानुसार देशका विभिन्न ठाउँमा नयाँ शाखा खोल्दै जाने बताएको छ । बैङ्कले आधुनिक बैङ्किङ् सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुर्याउने आफ्नो रणनीति रहेको जानकारी दिएको छ ।
क्याटरपिलरका भाइब्रेटिङ सोइल कम्प्याक्टर बजारमा
माघ ३, काठमाडौं (अस) । नेपालका लागि क्याटरपिलर इन्कको विक्रेता टयार्क्र्टस नेपाल प्रालिले क्याटरपिलर ‘भाइब्रेटिङ साइल कम्प्याक्टर’ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कम्पनीले १० टन सेग्मेण्टको सीएस -५५३ ई बजारमा ल्याएको हो । यसको कार्यक्षमता अपरेटिङ तौल १० दशमलव ८४ टन रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसको इञ्जिन क्षमता १ सय ३० एचपी रहेको छ ।
यसमा २ किसिमका भाइब्रेटिङ मोड रहेको बताइएको छ । यो उपकरण विषेशगरी राजमार्ग तथा शहरी क्षेत्रका सडक निर्माण गर्न बढी उपयुक्त रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो मोडलमा क्याट पेटेण्ट डिजाइन, डुअल पम्प प्रोपेल सिष्टम, पोड स्टाइल भाइब्रेटरी सिष्टम मेशिन प्रोटेक्टिभ सिष्टम रहेका कारणले अन्य उपकरणको भन्दा किफायती, गुणस्तरीय र भरपर्दो रहेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले विक्रीपछिको सेवाका लागि ललितपुरको नख्खुमा सुविधा सम्पन्न वर्कशप सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले निकट भविष्यमै इटहरी तथा बुटवलमा शाखा खोल्ने जानकारी दिएको छ ।
दाङमा साझाको मात्रै रू.१२ लाखका पुस्तक विक्री
माघ ३, दाङ (अस) । यसवर्ष साझा प्रकाशनको मुख्य शाखा कार्यालय दाङबाट १२ लाख रुपैयाँको पुस्तक विक्री भएको छ । गतवर्षभन्दा यसवर्ष ५ लाख रुपैयाँको बढी पुस्तक विक्री भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसवर्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित मुनामदन सबैभन्दा बढी विक्री भएको साझा प्रकाशनका शो रूम इञ्चार्ज कमल घिमिरेले जानकारी दिए । मुनामदन विगतका वर्षहरूमा पनि सबैभन्दा बढी विक्री हुने पुस्तकमा पर्दै आएको उनले बताए ।
त्यसैगरी लीलबहादुर क्षेत्रीद्वारा लिखित बसाइँ उपन्यास ४ सय ५० प्रति विक्री भएको साझा प्रकाशनले जानकारी दिएको छ । बढी विक्री हुने अन्य पुस्तकहरूमा नेपाली विज्ञान कथासङ्ग्रह, शिरिषको फूल, रूपमतीलगायत छन् ।
यसैबीच ‘पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शिक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ साझा प्रकाशन मुख्य शाखा कार्यालय दाङको आयोजनामा सोमवारदेखि घोराहीमा बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी शुरू भएको छ । प्रदर्शनीमा १ लाख २५ हजार दर्शकले अवलोकन गर्ने र ७ लाखको पुस्तक विक्री हुने अपेक्षा गरिएको छ । गतवर्ष १ लाख व्यक्तिले प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए भने ५ लाख रुपैयाँको पुस्तक विक्री भएको थियो । प्रदर्शनी माघ १३ गतेसम्म चल्नेछ । सो अवसरमा विभिन्न विधाका पुस्तकहरूमा ९ देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट दिइने साझा प्रकाशनले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनीमा ३ हजार ५ सय लेखकका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू राखिएको छ ।
२०६४ सालमा गरिएको पुस्तक प्रदर्शनीमा जम्मा १० हजार रुपैयाँको पुस्तक विक्री भएकामा २०६५ सालमा रू. ३ लाख र २०६६ सालमा ५ लाखको पुस्तक विक्री भएको थियो । प्रदर्शनीमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, साहित्यकार, लेखक एवम् बुद्धिजीवीहरूले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लेखक र पाठकबीचको सम्बन्ध सुमुधुर बनाउन पुस्तक प्रदर्शनी गरिएको साझा प्रकाशन दाङका प्रमुख विनोदबन्धु न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राइजिङको विक्री प्रवन्धकमा एस क्यापिटल
राइजिङ डेभलपमेण्ट बैङ्कले सर्वसाधारणका लागि छुटयाइएको रू. ६ करोडको साधारण शेयर निष्कासनका लागि एस क्यापिटल लिमिटेडलाई विक्री प्रवन्धकमा नियुक्त गरेको छ । रू.२० करोड जारी पूँजी रहेको यस बैङ्कले संस्थापकको ७० प्रतिशत शेयर यसअघि नै चुक्ता भइसकेकाले सर्वसाधारणका निम्ति छुटयाइएको ३० प्रतिशतले हुन आउने रू. ६ करोड मूल्यको ६ लाख कित्ता शेयर निष्कासनका लागि एस क्यापिटलसँग सम्झौता गरेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भानु कँडेलले बताए । उनका अनुसार बैङ्कले चालू आवको चैतमसान्तभित्र साधारण शेयर जारी गरिसक्नेछ ।
कृषि विकास बैङ्कको शाखा खानीखोलामा
कृषि विकास बैङ्कले धादिङ्को नौबिसे गाविसस्थित खानीखोलामा शाखा खोलेको छ । सो शाखाको आइतवार अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्दै राजनीतिक दवाव र कतिपय कर्मचारीको स्वार्थका कारण बैङ्कहरू डुब्ने गरेको बताए । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सामूहिक खेती प्रणाली अपनाउन सम्पूर्ण किसानहरूलाई उनको आग्रह थियो । सामूहिक खेती प्रणाली अपनाउने कृषकहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि रू.२ अर्ब बजेट छुट्टयाउने बारेमा छलफल भइरहेको बताए । सुडान घोटालाका दोषीलाई कारवाही गर्न नसकेकोमा गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि पोख्दै मन्त्री पाण्डेले आफू गृहमन्त्री भएको भए दोषीमाथि यसअघि नै कारवाही भइसक्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् धादिङ क्षेत्र नं. ३ का सभासद् शालिकराम जमरकट्टेलले कृषि विकास बैङ्कमा राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी भए पनि बैङ्क नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालन भए जस्तो हुने गरेको आरोप लगाए ।
ओम फाइनान्सको नाफा २ करोड २ लाख
ओम फाइनान्सले चालू आवको पुसमसान्तसम्म रू.२ करोड २ लाख सञ्चालन नाफा गरेको छ । चालू आवको पुसमसान्तमा कम्पनीको रू. १ अर्ब ९२ करोड निक्षेप सङ्कलन र रू. १ अर्ब ७८ करोड कर्जा लगानी रहेको कम्पनीका महाप्रबन्धक बुद्धि मल्लले बताए । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा शून्य दशमलव ३ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले हालै मात्र एनपीएन नेटवर्कको एटीएम कार्ड सञ्चालनममा ल्याएको थियो । निकट भविष्यमै पाटनको मङ्गलबजारमा शाखा खोल्ने तयारी गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको साधारणसभा
मञ्जुश्री फाइनान्सले निकट भविष्यमै सर्वसाधारणका लागि रू. ६ करोडबराबरको साधारण शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । गत शुक्रवार सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारणसभमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको गत आवमा रू. ७० करोड निक्षेप सङ्कलन र रू. ५४ करोड १६ लाख कर्जा लगानी रहेको थियो । कम्पनीले गत आवमा रू. २ करोड सञ्चालन नाफा गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
स्टेर्ण्र्डड फाइनान्स परासीमा
स्टेर्ण्र्डड फाइनान्सले परासीमा शाखा खोलेको छ । कम्पनीको यो ११औँ शाखा हो । सो शाखाको सोमवार उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष बैजनाथ जैसवालले उद्घाटन गरे । उक्त शाखाबाट कम्पनीले उद्योग व्यवसायी, विद्यार्थी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक लगायतलाई लक्षित गरी विभिन्न निक्षेप तथा कर्जा योजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
मुनाल सहकारीको तेस्रो वार्षिकोत्सव
पोखराको सभागृहचोकस्थित मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थाले वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय भवनका लागि रू.५ हजार ५ सय ५५ र विगत एक दशक देखि फुटबल खेलमा सक्रिय रहेको सहारा क्लव पोखरालाई रू.५ हजार ५ सय ५५ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा प्रगति टूर्स एण्ड ट्राभल्स तथा प्रगति कम्युनिकेशन चिप्लेढुङ्गाका सञ्चालक एवम् संस्थाका कोषाध्यक्ष विनोद ढुङ्गानले पत्रकार महासङ्घको सो भवन निर्माणका लागि ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । सहकारीमा १ सय ७५ जना शेयर सदस्य छन् । संस्थाको शेयर पूँजी रू. ८७ लाख ५० हजार रहेको छ । चालू आवको पुस मसान्तमा संस्थाले रू. ३ करोड ८० लाख निक्षेप र रू. ३ करोड ६५ लाख कर्जा लगानी गरेको थियो ।
साना किसान बैङ्कको अध्यक्षमा पाठक
साना किसान विकास बैङ्कको अध्यक्षमा खेमबहादुर पाठक निर्वाचित भएका छन् । बैङ्कको शुक्रबार सम्पन्न नवौं वार्षिक साधारणसभाले उनलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको हो । पाठक यसअघि साना किसान विकास बैङ्क धादिङका अध्यक्ष थिए । बैङ्कको सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूमा साना किसान सहकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै धर्मराज आत्रे र चाँदनी ढकाल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी अन्य सदस्यहरूमा नेपाल बैङ्कबाट सुदर्शनप्रसाद पोखरेल, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट केदारप्रसाद पनेरू र कृषि विकास बैङ्कबाट सागरचन्द्र जोशी र शिवरामप्रसाद कोइराला चयन भएका छन् ।
साना किसान विकास बैङ्कमा मुलुकभरका साना किसान सहकारी संस्थाहरूको ६० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । गत आवमा बैङ्कले रू. १ करोड ९० लाख ४० हजार खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैङ्कले गत आवमा रू. ९५ करोड ५८ लाख साना किसान सहकारीमार्फत किसानहरूलाई ऋण लगानी गरेको र रू. ५९ लाख २४ हजार असुली गरेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिएका छन् । नेपाल सरकारले चालू आवको बजेटमा मासुजन्य वस्तुहरूको उत्पादनको लागि छुटयाएको १ अर्ब रुपैयाँ पनि यसै बैङ्कमार्फत किसानहरूलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको बैङ्कले जानकारी दिएको छ ।
माघ १६ देखि धिमाल महोत्सव
धिमाल जातिको पहिचान र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी माघ १६ देखि फागुन १ गतेसम्म १५ दिने ‘धिमाल महोत्सव पर्यटन वर्ष२०११’ हुने भएको छ । झापाको दमकमा महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको महोत्सव आयोजक संस्था धिमाल जाति विकास केन्द्र नेपाललका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
स्थानीय उत्पादनको विक्री तथा प्रवर्द्धनबाट आर्थिक लाभ एवम् जातीय कला-संस्कृतिलाई पर्यटकीय महत्त्वसँग जोड्न महोत्सव आयोजना गरिएको सोमवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । महोत्सवमा मनोरञ्जनपूर्ण खेल, राष्ट्रियस्तरका कलाकारको प्रस्तुति, जातीय खानालागयत गतिविधिद्वारा पर्यटक आकर्षण गरिने थापाले बताए ।
प्राकृतिक पर्यटनका साथमा नेपाल सांस्कृतिक पर्यटनमा समेत धनी भएको अनुभूति धिमाल महोत्सवले दिन खोजेको नेपाल पर्यटन बोर्डका पर्यटन उत्पादन तथा अनुसन्धान विकास अधिकृत सुमन घिमिरेले बताए । उनले धिमाल महोत्सवलाई प्रभावकारी बनाई पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनसमेत आग्रह गरे ।